Perikopa Fjkm Alahady 30 Jona 2013 | FJKM Amboniloha
Perikopa Fjkm Alahady 30 Jona 2013
Lohahevitra : Mampanantena ny fahefany ny Tompo
Aza matahotra hianao, ry Jakoba kankana, Dia hianareo, ry Isiraely olom-bitsy, Izaho no hamonjy anao, hoy Jehovah, Ary ny Iray Masin’ny Isiraely no Mpanavotra anao.
Indro, ataoko kodia vy vaovao misy nify maranitra hianao; Hively ny tendrombohitra hianao ka hanorotoro azy ho vovoka Ary hanao ny havoana ho tahaka ny akofa.
Hikororoka azy hianao, ka hopaohin’ny rivotra izy, Ary ny tafio-drivotra hanely azy; Fa hianao kosa dia hiravoravo amin’i Jehovah, Ary ny Iray Masin’ny Isiraely no ho reharehanao.
Ny ory sy ny malahelo mitady rano, fa tsy mahita, Ary ny lelany mainan’ny hetaheta; Izaho Jehovah no hihaino azy, Izaho, Andriamanitry ny Isiraely, tsy hahafoy azy;
Hampiboika renirano ao amin’ny tendrombohitra mangadihady Aho Ary loharano ao amin’ny lohasaha; Hanao ny efitra ho farihy Aho Ary ny tany karankaina no loharano miboiboika.
Mba ho hitany sy ho fantany sy hoheveriny ary ho azony an-tsaina Fa ny tànan’i Jehovah no nanao izany, Ary ny Iray Masin’ny Isiraely no nahary izany.
Mitandrema, miambena, ka mivavaha; fa tsy fantatrareo izay hihavian’ny fotoana.
Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara.
Koa miambena hianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hihavian’ny tompon-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory.
Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin’ny olona rehetra koa: Miambena.
ARY hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin’ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra azy arivo taona, dia nanipy azy ho amin’ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy.
Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin’izay notapahin-doha noho ny filazana an’i Jesosy sy ny tenin’Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan’ny bibi-dia na teo anoloan’ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin’ny handriny na ho eo amin’ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin’i Kristy arivo taona.
Fa ny sisa amin’ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany.
Sambatra sy masina izay manana anjara amin’ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan’ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron’Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 24 juin 2013